Deer Chena / Bhurauni / Grey Yevakadzi Rori Mateki - Hanukeii
Tiri kurarama munyika matinogara pamwe chete nenhamba isingaverengeke yezvipenyu. Zvimwe zvine hutsinye, zvimwe ndezvemumba, uye kunyange zvisingaonekwe nemaziso edu uye vamwe vatinotya nekukura kwavo nesimba ravo.
En Hanukeii isu takagadzira muunganidzwa wemakepesi akafuridzirwa nehupenyu hwemhuka; mune mbizi, Koalas, dolphins, makava ... Tinopa iyi muunganidzwa mune dzakasiyana mumvuri uye mafomati, kuitira kuti chero mhuka yaunosangana nayo, iwe ugogona kuwana yakakunakira iwe.
Imwe yetsika dzinojairika mukukurukurirana, mitambo kana kunyangwe mukufunga kwedu pachedu, ndeyekufunga nemhuka ipi yatinozvizivisa nayo, iyo iyo vamwe vatinoshamwaridzana nayo kana yatinoda kufanana nayo; Uye ndezvekuti, kunyangwe isu tisingagovane mutauro wekutaura, tinochengetedza, neimwe nzira, kutaurirana navo. Vamwe vanotikurudzira kuremekedza, vamwe runako, vamwe vatinoona neushingi uye ushingi, uyezve vamwe vatinoona vachinyara kana kushaya simba.
Iwe unotoziva kare kuti ndechipi chako chirevo chemhuka, icho chinokukurudzira iwe kana chinokupa iwe simba? Isu tine chokwadi chekuti inomiririrwa muunganidzwa wedu wemakepisi kubva Hanukeii
Mapfekero atinoita, matauriro atinosarudza izvo zvinowirirana nechitarisiko chedu chezuva nezuva, kana izvo zvatinowana zvinokwezva uye zvatinoda kuwana nekuwedzera kuwadhiropu yedu zvinhu zvinoratidza humwe hunhu hwedu uye hunhu.
Sei isu tinoda kuti vamwe vatione, maitiro atinoda kuzviona isu mazuva ese patinobva pamba uye mhando yezvishongedzo zvinoita kuti tinzwe kugadzikana zvine musoro kana zvasvika pakuratidza nyika kuti tiri vanhu rudzii.
En Hanukeii Tinoda kuti iwe unzwe sekunge iwe zana muzana uye isu takagadzira aya makapeti akafuridzirwa nenyika yemhuka uye akanyatsogadziriswa kune ako maitiro.
Iyi tambo yemakepisi inotevedzera zvinoitika zvevanojairika vemarori makepi, aive echimurenga chiitiko pasirese kubva pavakazvarwa. Vhura Hanukeii Isu tiri vanofarira baseball ngowani, uye isu takagadzira izvi zvishongedzo kuchichinjira kune edu masitayera.
Makapu akafuridzirwa nenyika yemhuka ane chimiro mune iro kumashure kune mesh, uye kumberi kune vhiza inodzivirira mwaranzi yezuva kupinda mumaziso. Pachikamu chepamusoro cheiyo visor tinopa chigamba umo mhuka inoratidzwa ine zita rayo rinoratidzwa pazasi.
Barefoot Royal Bhuruu 40.00 €